စပိန်ဖိုင်များကိုဝိုင် - ကျနော်တို့စပိန်နိုင်ငံလုပ်နေကြတယ်
ကန့်သတ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကနေဝိုင်။ စပိန်နှင့်ကမ္ဘာအတွက်ဖက်ရှင်ဝိုင်။ လူအားလုံးတို့သည်စပျစ်သီး, ဇာစ်မြစ်သားအပေါငျးအယူခံအသစ်တစ်ဦးအသက်တာ၌အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီးတကယ်တန်ဖိုးရှိပုံမှန်အတိုင်း, စပိန်, ပြင်သစ်, အင်္ဂလိပ်, အီတလီအပေါင်းတို့နှင့်ဝိုင်။
တွင် Posted 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 By HBမှတ်ချက်
Bierzo ၏စပိန်ဝိုင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပို. ပို. ဝယ်လိုအားအတွက်တစ်နေ့တာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခေါင်းစဉ်နဲ့တူမယ့်တစ်ဦး fad ကပြောပါတယ်။ Marshals Mencia စပျစ်သီးကိုသားစဉ်မြေးဆက်အဘို့ဘဏ္ဍာအတွက် Know-ဘယ်လိုပေါ်အခြေခံပြီးရရှိခဲ့ပါပြီ။ Bierzo ဝိုင်အလွန်အမင်းတစ်ဦးအလတ်စားပြင်းထန်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနေကြတယ် ဆက်ဖတ်ရန်
တွင် Posted 14 ဇန်နဝါရီလ 2019 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 By HBမှတ်ချက်
လက်ရှိတွင် Bodegas Pradorey ကသိမ်းပိုက်အဆိုပါအိမ်ခြံမြေ၏သမိုင်း domains များ Isabel အားဖြင့်ကက်သလစ်လွှဲပြောင်းယူ, နောက်ပိုင်းတွင်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကြေးမြေများဖြစ်လာခဲ့သည်, မူပိုင်၏အပိုင်ထဲမှာတည်းခို, သည်အထိခဲ့ကြသည်သောအခါ, အစောပိုင်းတစ်ဆယ့်ခြောက်ရာစုမှနောက်ကျောစတငျရ နှစ်ဆယ်ရာစုသည်အထိပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာ ဆက်ဖတ်ရန်
တွင် Posted7ဇန်နဝါရီလ 2019 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 By HBမှတ်ချက်
Valdepeñas၏မြို့တော်စည်ပင်ကခုနှစ်, Ciudad ရီးရဲလ်, သူတို့ရာကျော် Bodegas Navarro ဇျဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကဝယ်ယူသည့်အခါတစ်မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့ပြီးကဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏မူဝါဒဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုယူပြီးနှင့်အရည်အသွေးနှင့်သီးသန့်အပေါ်အဓိကမှီခိုနေကြရသည်, နှောင်းပိုင်း 80 ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဆောင်များ ဆက်ဖတ်ရန်